त्यहाँ इन्फ्रारेड विकिरण विभिन्न स्रोतहरू छन्। हाल, तिनीहरूले घरेलू उपकरण, स्वचालन प्रणाली, सुरक्षा हो, र पनि औद्योगिक उत्पादनहरु को सुकाउने लागि प्रयोग गरिन्छ। सही सञ्चालन संग इन्फ्रारेड प्रकाश स्रोत मानव शरीर असर छैन, त्यसैले उत्पादनहरु धेरै लोकप्रिय छन्।
धेरै शताब्दीयौंदेखि, प्रकाश को प्रकृति र प्रभाव को अध्ययन एक प्रमुख मन ओगटेको छ।
इन्फ्रारेड प्रकाश अनुसन्धान astronomer डब्ल्यू Herschel मार्फत प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा पत्ता थियो। यसको सार फरक सौर साइटहरु को ताप प्रदर्शन अध्ययन थियो। यी वैज्ञानिक एक थर्मामीटर ल्याए र तापमान मा वृद्धि पछि लागे। एकाइ रातो किनारा छोएको छ जब यो प्रक्रिया अवलोकन छ। डब्ल्यू Herschel त्यहाँ नेत्रहीन देखेको छैन सकिन्छ विकिरण एक प्रकारको छ कि अन्तमा, तर यो एक थर्मामीटर संग निर्धारण गर्न सम्भव छ।
इन्फ्रारेड रेज: आवेदन
तिनीहरूले व्यापक मानव जीवनमा वितरण हुन्छ र विभिन्न क्षेत्रहरू आवेदन फेला:
सैन्य विज्ञान। आधुनिक मिसाइलहरु र warheads स्वतन्त्र उद्देश्य मा गराइएको गर्न सकिन्छ कि, प्रदान रात दृष्टि उपकरणहरू इन्फ्रारेड विकिरण को आवेदन को परिणाम हो जो।
Thermography। इन्फ्रारेड विकिरण superheated वा supercooled क्षेत्रको अध्ययन लागि प्रयोग गरिन्छ। इन्फ्रारेड तस्बिरहरू पनि खगोल विज्ञान प्रयोग गरिन्छ आकाशीय शरीर पत्ता लगाउन।
उत्पत्ति ठूलो लोकप्रियता प्राप्त इन्फ्रारेड हीटर को ताप र भित्री पर्खाल निर्देशित छ कामकाज जो। त्यसपछि तिनीहरूले स्पेस गर्न बन्द गर्मी दिनुहोस्।
रिमोट नियन्त्रण। टीवी, स्टोव, हावा कंडीशनर, आदि को लागि सबै अवस्थित Remotes इन्फ्रारेड किरण साथ सुसज्जित।
चिकित्सा इन्फ्रारेड रेज मा विभिन्न रोगहरु को उपचार र रोकथाम बाहिर छ।
जहाँ यी वस्तुहरू लागू विचार गर्नुहोस्।
इन्फ्रारेड ग्याँस बर्नर
विभिन्न परिसर लागि ताप प्रयोग इन्फ्रारेड बर्नर।
सुरुमा यो Greenhouses, गैरेज (अर्थात्, गैर-आवासीय परिसर) को लागि प्रयोग भएको थियो। तथापि, आधुनिक प्रविधि पनि अपार्टमेन्ट मा यसको प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। मानिसहरू सूर्यका जस्तो उपकरण को काम सतह चालू रूपमा, सूर्य एक बर्नर यन्त्र भनिन्छ। समय, यी उपकरणहरू तेल हीटर र Convectors प्रतिस्थापित छ।
इन्फ्रारेड बर्नर अन्य ताप उपकरणहरू तरिका भिन्न हुन्छ। गर्मी कारण हस्तान्तरण गरिएको छ इन्फ्रारेड रेज, को उत्सर्जन छन् जो मानिसहरूलाई देखिने। यो सुविधा गर्मी मात्र होइन हावा तर पनि पछि पनि कोठा मा तापमान वृद्धि जो भित्री, मा भित्र पस्नु गर्न अनुमति दिन्छ। को रेज मुख्यतया भित्री र पर्खालहरु मा केन्द्रित छन् किनभने इन्फ्रारेड रेडियेटर, हावा सुक्खामा छैन। पछि गर्मी स्थानान्तरण सीधा प्रक्रिया केही मिनेट मा ठाँउ लिन्छ wherein कोठा को स्पेस, गर्न पर्खालहरु वा वस्तुहरू देखि गरिनेछ।
यस्तो उपकरणहरू को मुख्य लाभ कोठा को एक छिटो र सजिलो ताप छ। उदाहरणका लागि, + 24ºS मा चिसो कोठा हीट, यो 20 मिनेट लाग्छ। प्रक्रिया त्यहाँ ठूलो माटो र धूलो को गठन बढावा जो कुनै हावा प्रवाह छ। तसर्थ, इन्फ्रारेड emitter एलर्जी हुनेहरूलाई क्षेत्रमा मान्छे मा स्थापित छ।
यसबाहेक, इन्फ्रारेड प्रकाश धूलो संग सतह मा झर्ने, यो एक परिणाम रूपमा बलिरहेको कारण छैन र गर्दैन, जलेको धूलो को कुनै गन्ध। को ताप एकाइ गुणस्तर र स्थायित्व को ताप तत्व मा निर्भर गर्दछ। यस्तो उपकरणहरू, एक माटोको प्रकार प्रयोग गरिन्छ।
यस्तो उपकरणहरू को मूल्य एकदम कम छ र जनसंख्याको सबै खण्डहरूमा सुलभ छ। उदाहरणका लागि, एक ग्याँस बर्नर 800 rubles हो। सम्पूर्ण चुलो 4000 rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ।
को इन्फ्रारेड सानो घर के हो? यो (जस्तै पाइन रूपमा) काठ को प्राकृतिक किसिमका देखि निर्माण भएको एक विशेष कोठा छ। यो एक रूख मा अभिनय, इन्फ्रारेड हीटर स्थापित।
को ताप समयमा अस्थिर विनियोजन - उपयोगी घटक, Fungi र ब्याकटेरिया विकास वा घटना रोक्न जो।
यो इन्फ्रारेड सानो घर लोकप्रिय एक सना भनिन्छ। इन्डोर हावा तापमान पुग्छ 45 ° C, त्यसैले एकदम आराम यो रहनुहोस्। यो तापमान मानव शरीर समान रूप र गहिरो अप न्यानो गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले गर्मी हृदय प्रणाली असर गर्दैन। प्रक्रिया को संचित toxins र कचरे हटाउँदछ समयमा, यो शरीर गरेको चयापचय (कारण रगतको तीव्र आन्दोलन गर्न) accelerates, र ऊतक अक्सिजन संग सार्थक भयो। तथापि, डराएको - यो छैन इन्फ्रारेड सना को मुख्य विशेषता हो। यो स्वास्थ्य सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मानव मा इन्फ्रारेड सना असर
यी कोठा मानव शरीर मा एक लाभदायक प्रभाव छ। प्रक्रिया समयमा, सबै मांसपेशिहरु, Tissues र हड्डी अप न्यानो। रगत प्रवाह को प्रवेग अक्सिजन संग मांसपेशीमा र Tissues saturate गर्न मद्दत गर्छ जो चयापचय, असर गर्छ। यसबाहेक, इन्फ्रारेड सानो घर विभिन्न रोगहरु रोक्न उपस्थित। अधिकांश मानिसहरू मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया छोड्नुहोस्।
इन्फ्रारेड विकिरण को नकारात्मक प्रभाव
इन्फ्रारेड स्रोतहरू मात्र शरीरमा सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ, तर पनि उहाँलाई हानि गर्न।
लामो समयसम्म जोखिम बीम राता वा बल्न निम्त्याउँछ capillaries विस्तार गरिएको छ। विशेष इन्फ्रारेड विकिरण को हानिकारक स्रोतहरू दृश्य को शरीर लागू हुन्छ - cataracts को गठन छ। केही अवस्थामा, एक व्यक्ति दौरा शामिल छ।
मानव शरीरमा पैदा, असर छोटो-रेज गर्मी स्ट्रोक। केही डिग्री को मस्तिष्क तापमान मा वृद्धि अवलोकन गिरावट छ संग: आँखा, चक्कर आना, वाकवाकी को darkening। तापमान एक थप वृद्धि मेनिनजाइटिस गर्न सक्छ।
Worsening वा सुधार को तीव्रता कारण छ को विद्युत क्षेत्र। यो ज्वरो र थर्मल विकिरण स्रोत बाट दूरी विशेषता छ।
लामो-लहर इन्फ्रारेड विकिरण जीवनको विभिन्न प्रक्रियाहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। छोटो मानव शरीर मा एक ठूलो प्रभाव छ।
इन्फ्रारेड रेज को हानिकारक प्रभाव कसरी रोक्न?
पहिले छलफल रूपमा, मानव शरीर मा नकारात्मक प्रभाव छोटो छ थर्मल विकिरण। को इन्फ्रारेड विकिरण खतरनाक छ जसमा उदाहरण विचार गर्नुहोस्।
मिति, स्वास्थ्य, इन्फ्रारेड हीटर, उज्ज्वल तापमान माथि 100 ° सी हानि पुर्याउन सक्छ तिनीहरूमध्ये निम्न छन्:
औद्योगिक उपकरण उज्ज्वल ऊर्जा उत्सर्जन। नकारात्मक प्रभाव रोक्न, तपाईं सुरक्षा वस्त्र र सुरक्षा थर्मल तत्व प्रयोग र काम कर्मियों बीच निवारक उपाय पूरा गर्नुपर्छ।
इन्फ्रारेड यन्त्र। सबै भन्दा प्रसिद्ध एक हीटर चुलो छ। तर, यो लामो प्रयोग बाहिर गएको छ। झन्, अपार्टमेन्ट, देश घरहरू र कटेज बिजुली इन्फ्रारेड हीटर प्रयोग गर्न थाले। आफ्नो डिजाइन ताप तत्व प्रदान विशेष थर्मल इन्सुलेट सामाग्री सुरक्षित छ जो, (एक सर्पिल मा) छ। यस्तो जोखिम रेज मानव शरीर लागि हानिकारक छैन। को गर्म क्षेत्रमा हावा सुकेको छैन। 30 मिनेट मा कोठा गर्मी। पहिलो, इन्फ्रारेड वस्तुहरु heats, र पहिले नै तिनीहरूले सारा घर छ।
इन्फ्रारेड विकिरण व्यापक औद्योगिक देखि लिएर र औषधीहरू समाप्त क्षेत्रमा विभिन्न प्रयोग गरिएको छ।
तथापि, तिनीहरूलाई सम्पर्क रेज एक व्यक्ति एक नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ किनभने, ध्यान दिएर हुनुपर्छ। सबै तरङलम्बाइ र ताप उपकरणबाट दूरी मा निर्भर गर्दछ।
त्यसैले, हामी इन्फ्रारेड विकिरण को स्रोतहरू के हुन्, भेटिएन।
सञ्चालन Multivarki यसको कार्य को सिद्धान्त
घर को लागि एलईडी पट्टी - आफैलाई कसरी जडान गर्न
कसरी सरकार छ
Luidzhi Bokkerini: जीवनी र काम
किन पात पहेंलो सुनगाभाहरू बारी गर्छन्?
भौतिक चिकित्सा कटि: अभ्यास को विवरण, समीक्षा
को भित्री ढोका कसरी चयन गर्न
जाडो माछा मार्ने लागि जूता: कसरी चयन गर्ने? माछा मार्ने लागि सामान
क्रोम घरमा आफ्नै हात चढाना